November | 2012 | Somaliland Hargeisa City
Falastiin oo xubinimo sare loo aqoonsaday
30 November, 2012 — somaliland1991
Maalinta waxa taariikhida galaysa, in markii ugu horreysay Falastiin, loo aqoonsado xubin sare oo ka tirsan UN.
Un-ta oo ka kooban 193 dal ayaa waxaa cod loo qaaday in Falastiin ka mid noqodto xubin UN.ta
Sidan ayey u dhacday codayntii:
tirada guud waa 193 oo dal
138 ayaa ogolaaday
40: way ka aamuuseen
9 : way diideen.
markii ay natiijadani soo baxday ayaa waxaa farxad wwyn u noqodtay xubnihii metelayey Falastiin, oo uu ugu horeeye madaxweynaha Falastii,
Maxamyd Cabas iyo dhammaan shacbi weyna Falastiin oo dabaaldeg ka samaynayey wadooyika Qasa iyo Ramallah.
Halkan ka daawo sida magaalada Burco looga codeeyey
Halkan ka dhegayso VOA Somali oo warbixin dheer kaga waramaysa sida ay dooorashadu u socodto dalka oo dhan
(Halkan hoose ka dhegayso) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Waxa kale oo jira in degmooyin ka tirsan Sanaag-bari aan la geynin sanduuqyadii codbixintan, ka dib markii cabsi dhinaca amniga ah laga soo sheegay.
Codbixinta ayaa lsoo gaba-gabowday 6-dii makhribnimo ee saacadda Afrikada Bari, iyada oo ku dhawaaqista natiijadana la filayo inay qaadato muddo hal toddobaad ah.
Warbixino doorashada la xiriira hoosta ka dhageyso.
Halkanka daawo sidii doorashadu uga dhacday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool
Halkan ka daawo sawirro madaxda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo shacabkoodii oo codaynaya
oorashooyinka Golaha Deegaanka Somaliland Oo Si Nabad-gelyo Ah Ugu Bilaabmay Dalka Iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Codkiisa Dhiibtay
Doorashadan ayaa ku bilaabantay si habsami ah, iyada oo madaxweynaha Somaliland Axmed………….
Hargeysa (GNS) – Guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Somaliland ayaa waxa saaka ka bilaabmay cod bixinta doorashada goleyaasha Deegaanka, taasi oo ay ku tartamayaan 7 urur/xisbi oo sadex ka mid ah la doonayo inay u gudbaan xisbiyo qaran.
Magaalada Hargeysa oo ah halka ugu muhiimsan ayaa cod bixintu ka bilaabmatay 7:40 am, waxaana goobaha cod bixinta taagan dadweyne safaf dhaadheer u taagan,kuwaas oo qaarkood saqdii dhexe
ee xalay yimaadeen goobahaasi. Doora
shadan ayaa ku bilaabantay si habsami ah, iyada oo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu codkiisa ka dhiibtay xarunta hay’adda shaqaalaha, waxana hadalkiisii ka mid ahaa “Codkii aan xaqa u lahaa ayaan ka dhiibtay halkan, INSHA ALLAH waxaan rajaynayaa in aynu noqono kuwii ku guulaysta Doorashadaas ayaan ILAAHAY Ka rajaynayaa” Sidoo kale ay ka codeeyeen marwada koowaad, xubno ka mid ah golaha wasiirada, guddoomiyeyaasha Ururada ku tartamaya doorashadan iyo Taliyeyaasha Ciidamada Booliska, Laanta Socdaalka. Madaxweyne Siilaanyo ayaa markii uu codka dhiibtay ka dib waxa uu u lugeeyey xarunta madaxtooyada, isaga oo ay hareero socdaan wasiirada madaxtooyada, arrimaha gudaha iyo masuuliyiin ka mid ah xisbiga
Kulmiye. Wararka laga helayo gobolada dalka ayaan sheegayn wax dhibaato ah. Gabiley News Desk Hargeysa
Halkan ka daawo dorashadii oo si habsami uga socodta dhammaan gobolada Somaliland